Cabasho ku saabsan Sharciyada Xaqdarada ah ee lagu Fulinaayo Xuduudaha dhulka iyo Badda Somalia
Cabasho ku saabsan Sharciyada Xaqdarada ah ee lagu Fulinaayo Xuduudaha dhulka iyo Badda Soomaaliya
Diplomaasi hore ee Soomaaliyeed.
English Version: Ka akhri Halkan
"Haddii aan nahay Shacabka Soomaaliyeed waxaan Caalamka u caddaynaynaa in Xuduudaha dhulka iyo badda Soomaaliya uu yahay lama taabtaan, oo ayna tahay hanti ay Soomaali oo dhan ay wada leedahay, Go’aankeedana waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed. Waana ka soo horjeednaa in Cabbir iyo xeerar sharci darro ah lagu fuliyo Soomaaliya oo keliya."
KU: United Nation - E'mail
Ku: European Union -E'mil
Ku: Midowga Africa - 'mail
Ku: Jaamacadda carabta - E'mil
Ku: USA - E'mail
Ujeeddo: Cabasho ku saabsan Sharciyada Xaqdarada ah ee lagu Fulinaayo Xuduudaha dhulka iyo Badda Soomaaliya
Soomaaliya Waxay Xornimo Buuxda qaadatay July 1, 1960. Waxaana markaas loo sameeyey Xuduudo dhuleed iyo mid badeed ah, taaso Soomaaliya ay xaq u lahayd.
Xeerka Qarammada Midoobey ee Badaha Adduunka ee UNCLOS waxa ay Soomaaliya saxiixday 10kii December 1982. Soomaaliya waxay xeerkaas dhaqan gelisay 24kii July 1989. (Fiiri map-ka Kore)
Xeerka Badaha Adduunku wuxuu si rasmi ah Qarammada Midoobey uga dhaqan galay 16kii November 1994. Waxaa socota inay Qarammada midoobay ka shaqaynaysay sidii Badaha Adduunka sharci loogu samayn lahaa, waxay qaadatay labaatan sanadood (1970-1994) in la dhaqan galiyey xeer oranaya: Waddan kasta wuxuu xaq u leeyahay (370 km) oo ka bilaabanaysa xeebta baddiisa inuu isagu leeyahay ku takri falkeeda. Xilligaas waxaa jirtay dowladdii Soomaaliya oo wax ka saxiixday.
Shirweynihii Qarammada Midoobey ee 10kii December 1982 lagu qabtay magaalada Montego Bay ee dalka Jamaicaayaa waxaa 117 dal saxiixeen sharciga Qarammada Midoobey ee Badaha Adduunka. Waxana uu Xeerkaasi si rasmi ah u dhaqan galay 16kii November 1994. Dalal badan ayaa xeerkaas saxiixay, oo ay Soomaaliya ka mid tahay, kaddibna dhaqan geliyey. Waxaa Xeerka Qarammada Midoobey ee Badaha Adduunka loo soo gaabiyaa UNCLOS (United Nations Convention of the Law of the Sea).
Qodobka 6aad: Kalluumaysiga Badda Dhulka Soomaalida iyo u kala gooshinta xamuulka iyo dadka ee dekedaha Soomaaliya waxay khaas u tahay maraakiibta sita Calanka Soomaalida iyo markiibta u haysta fasax/sharci.
iyadoo ay jiraan xeerarkaas badaha Caalamka iyo kan xeerarka Soomaaliya u gaarka ah ayaa Qaramada midoobey iyo waddamada Commonwealth waxay ku xadgudbayaan Shuruucda Badaha Caalamka iyo xeerarkii u gaarka ahaa Soomaaliya, Waxayna badda Soomaaliya u samaynayaan cabbir Cusub oo aan waafaqsanayn Shuruucda badaha caalamka iyo kan Soomaaliya. Arintaasna waa xadgudub cad oo lagu samaynayo Xuduudaha badaha Soomaaliya.
COMMOWEALTH ma lahan awood aay ku masaxdo ama ku tirtirto sharciga badaha ee Soomaaliya uga diinwaangashan Qaramada Midoobay, laakiin khayaanada aay wataan ayaa waxay tahay iyagoo adeegsanaya Shakhsiyaad Somali ah, rabana inay si dadban u yiraahdaan Sharcigii badaha ee Soomaaliyeed, iyagaa iskood isaga tanaasulay oo cid ku Khasabtay ma jirto.
Haddii aan nahay Shacabka Soomaaliyeed waxaan Caalamka u caddaynaynaa in Xuduudaha dhulka iyo badda Soomaaliya uu yahay lama taabtaan, oo ayna tahay hanti ay Soomaali oo dhan ay wada leedahay, Go’aankeedana waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed. Waana ka soo horjeednaa in Cabbir iyo xeerar sharci darro ah lagu fuliyo Soomaaliya oo keliya. (fiiri map-ka, shaxda iyo Buugaagta muujinaysa xeerarka Badaha caalamka).
Qaramada Midoobay waxay Texgelisaa Xeerarka Xuduudaha iyo Badaha waddamada caalamka oo dhan ilaa aan Soomaaliya ka ahayn, sabatoo ah Soomaaliya ma lahan Dowlad awood badan oo u doodad Xuquuqda Shacabkooda. Dhibaatadaas Soomaaliya ka jirta darteed ayey UN ka faaideysanaysaa oo Soomaaliya ku fuleynsaa xeerar xaqdaro ah.
Haddii aan nahay Shacabka Soomaaliyeed waxaan UN –ka iyo Wadamada Commonwealth ka codsanaynaa inay naga joojiyaan Xaqdarada ay Soomaaliya ku wadaan, nagana joojiso sharciyadaan xaqdarada ah oo Soomaaliya oo keliya lagu fulinaayo.
Soomaaliya uguma horeyso wadamada fashilmay, ee waxaa jira wadamo badan oo sida Soomaaliya oo kale dhibaatooyin uga dhacay. UN-ka iyo Caalamka waa u gurmadeen, iyadoo aan lagu xadgubin Qaranimadooda iyo Xuquuqda Xuduudahooda, waxaana lala xaliyey dhibaatooyinka ka jira wadamadaas, sidoo kalena dib u dhiska iyo Nabadgelyada ayaa aad looga taageeray,
Haddii aan nahay Shacabka Soomaaliyeed waxaan xaq u leenahay in la tixgeliyo Qaranimadeena iyo Xuduudaheena dhul iyo bad. Sida loo texgeliyo waddamada kale ee Caalamka. Waxaan kaloo xaq u leenahay in nala garab istaago iyadoo la tixgelinaayo Diinteena, Dhaqankeena iyo Dastuurka noo degsan.
Shacabka Soomaaliyeed waa ka baxayaan dhibka ay hadda ku jiraan, waxaana jiri doonta xisaabtan iyo dabagal ay Soomaaliya samayn doonto, taasoo ku saabsan Sharciyada xaqdarada ah iyo wadamadii ka dambeeyey.
"Shicibka Soomaaliyeed waxay ugu dambeenta la xisaabtami doonaan kuwa xadgudubka ku sameynaya JIRITAANKA QARANNIMADA SOOMAALIYEED..."
Qoraaga (Bashiir Shiikh Maxamed), waa diblomaasi Soomaaliyeed oo ka soo shaqeeyay safaaraddii Soomaalida ee Stockholm xiligii uu safiirka ka ahaa halgamaagii weynaa ee ee Cabdulaahi Ciise Maxamuud (Alle ha u naxariistee). Sannadkii 1979-kiina waxa uu noqday sii hayaha (Chargé D'affaires) ee safaaradihii Soomaaliya uga furnaa waddamada Sweden, Denmark iyo Norway.
Faafin: SomaliTalk.com | Sept 3, 2011
"NO to any threat infringing on the sovereignty of Somalia, especially concerning the 200nm territorial waters, given since 1972, and the 200nm EEZ (Exclusive Economic Zone / UNCLOS) already in place since 1989" (ecoterra - 03. September 2011)....